September 4, 2020 369
ब्यालेन्स कम भएर फोन गर्न असमर्थ नम्बरका लागि जिरो ब्यालेन्स प्याकेजमा २५ वटा अन–नेट एसएमएस, ५० मिनेट अन–नेट भ्वाइस, १०० एमबी डाटा, प्याकेजको अवधि सात दिनको हुनेछ । यस प्याकेज आगामी दुई दिनसम्म उपलब्ध गराइने बताइएको छ ।
Prevघरको कुन दिशामा धन तथा गरगहना राख्ने
Nextआमा छोरा का’ण्डको बारेमा अलौकिक माताको ड’र लाग्दो खुलाशा!
सुनसान बन्दै पशुपति मन्दिर
धरानमा काेराेनाबाट ३ जनाकाेमृत्यु
निजी स्कुलमा साउन १ देखि अनलाइन कक्षा बन्द, शिक्षकलाई बेतलवी घर विदा
आफ्नो फोक्सो ७२ घण्टामा आफैं यसरी सफा गर्नुहोस्, कुनै पनि रोगले छुन सकिदैन
खुशीको खबर! बल्ल कोरना भाइरसको औषधी चीनले नै पत्ता लगायो ! (12019)
अमेरिकामा कोभिड-१९ को खोप वितरण गर्न सेना परिचालन गरिँदै (11300)